Fanarenana vakoka :: Nasongadin’ny Filoha ny haha-soa iombonana ny asa eny Anatirova • AoRaha
Nanokana fotoana lava namaliana an’ireo kiana miantefa aminy manoloana an’ireo asa fanarenana eny amin’ny Rovan’Antananarivo ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, afak’omaly alina. Nitondrany fanazavana sy tohankevitra avokoa, na ny asa ao amin’ny Lapan’i Manjakamiadana na ny fananganana an’ ilay Kianja Masoandro ao Anatirova. Nasongadin’ny Filoha sady notohanany tamin’ny alalan’ny fanehoana an-tsary ny ho vokatr’ireo asa hatao ny haha-soa iombonana ny fanatsarana sy fanamboarana hatao eny an-toerana.
Somary nanao sesilany tokoa ireo fanakianana an’ity tetikasan’ny fitondram-panjakana eny Anatirova ity, indrindra ny Kianja Masoandro na ilay sehatra maka endrika ila-bolana naorina ao antokotanin’ny Rova. Tsy takona nafenina ireny fijapian’ny mpanao politika ireny, ho mariky ny fanoheran’izy ireo hatrany ny mpitondra, ary vao tsy ela ny fanambaràna fandàvana ny asa avy amin’ny Fikambanan’ny mpianatra mpiaro ny vakoka amin’ny oniversitemparitra Androy ary ny Tarak’ Andriamanjaka…
Ankoatra ny fanatsarana anefa, dia notsindrian’ny Filohan’ny Repoblika, fa hiteraka fidiram-bola antsika, amin’ ny alalan’ny fisarihana mpizaha tany an’hetsiny ny vokatr’ izao asa fanarenana sy fanorenana izao. Nampahafantariny sahady ny fanitsiana an’ireo saram-pidirana. « Ho zakan’ny Malagasy rehetra ny sara vaovao. 2 000 ariary ho an’ny mpianatra, 10 000 ariary ho an’ny olon-tsotra. Ho 27 euros na 100 000 ariary indray ny an’ireo vahiny », hoy izy.
Na eo aza ny tsy fitoviankevitra momba ny fikitihana an’io vakoka io dia manamafy ny Filoha amin’ny finiavana hamelona hatrany ny tantarampirenena malagasy, tany aloha tany, indrindra ny fanarahana an’ireo teknôlôjia vaovao.